+ 1M vadzidzi vanodzidza Linux nekuisa ... | Linux Vakapindwa muropa
Humbowo hwekuti kufarira uye kurema kweLinux mune ino chikamu kuri kukura pasina kumira ndiko kuongorora huwandu hwevadzidzi vari kudzidza nezve chirongwa ichi. Uye nhau dzinonakidza kwazvo kuona kuti vanopfuura mamirioni 1 vadzidzi vari kuzviita izvozvi uye nhamba iri kuramba ichikwira nekuwedzera ...
Iyo nhamba chaiyo chaiyo, asi ... Unoziva here yakanakisa Iyo nhamba yevadzidzi ndeye chete yemahara yekusuma kosi inodzidziswa neLinux Foundation, saka iyo chaiyo nhamba yevadzidzi vanodzidza Linux pasirese mune mamwe makosi yakakwira zvakanyanya.
Anenge makore matanhatu apfuura Iyo Linux Foundation yakatanga yayo yekutanga yemahara online yekutanga Linux kirasi. Nhasi ine makosi akati wandei, senge iyo yandakakusiira mune yapfuura yekusuma link pane edX chikuva. A MOOC (Massive Open Online Makosi) iri kuve nebudiriro yakawanda. Uye ndiye uyo akagona kukunda chipingamupinyi chekunyoreswa kwemiriyoni imwe.
Kwete zvakaipa zvachose ... Asi hazvishamisi futi tichiziva kuti iyi inoshanda sisitimu yakatanga sekutandarira ikozvino ndiyo inotsigira Internet, supercomputers, inopa simba kune zvigadzirwa zvegore, inochengeta akawanda mafoni mafoni achimhanya, inokwanisa mamwe maindasitiri uye akatsoropodza masisitimu, pamwe nehurumende, nezvimwe.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva izvo Linux system manejimendi uye mainjiniya vanobhadharisa zvimwe zvinoenderana nezvimwe zvidzidzo zvakaitwa. Dzimwe ongororo pane maseru senge Chokwadi uye mamwe emabhodhi emabasa zvakaratidza kuti makambani ari kunyanya kutsvaga vanhu vakadzidziswa muGNU / Linux sisitimu inoshanda.
Saka kana iwe uchida kuenderera kuve PC tekinoroji, dzidza Windows, asi kana usinga gadzirire izvo uye uchida chimwe chinhu, kuwana sysadmin zvinyorwa kwaunogona gadzirisa maseva munzvimbo dze data, wobva wasarudza Linux ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » + 1M vadzidzi vanodzidza Linux nekuisa ...
Zve manejimendi manejimendi. Mimwe Mhinduro Inobatsira Vanamuzvinabhizimusi Vanogona Kushandisa